Steve McManaman Oo Sharraxay Sababta Aanu U Doonayn In Erlin Haaland Ugu Biiro Real Madrid – Cadalol.net
Weeraryahanka da’da yar ee Erling Haaland waxa uu ka mid yahay xiddiga dunida loogu doonista badan yahay waqtigan, waxaana isha ku haysa koox kasta oo damacsan inay guulo waaweyn gaadho sannadaha soo socda, hirdankiisana waxa si buuxda loogu kala adkaaday bishii January oo ay Borussia Dortmund kaddib markii ay kala soo wareegtay RB Leipzing iyadoo saxeexiisa ku garaacday Manchester United.
Inkasta oo laba bilood oo kaliya laga joogo waqtigii uu ku biiray kooxda reer Germany, haddana wali waxa uu ku jiraa hadal-haynta suuqa iyo laacibiinta ay naadiyadu bartilmaameedsan doonaan marka la gaadho bisha June ee uu suuqa iibku furmo.
Real Madrid oo xili ciyaareedkan u dhibaatootay dhaliye la’aan, waxay xagaaga raadin doontaa weeraryahan ku fiican khibrad tayo sare leh, waxaana liiskeeda safka hore kaga jira Kylian Mbappe oo PSG ka tirsan iyo Erling Haaland, sidoo kale, garabka Liverpool ee Sadio Mane ayay wararku ku xidhiidhinayaan.
Sidaas oo ay tahay, xiddigii hore ee khadka dhexe uga ciyaari jiray Real Madrid iyo Liverpool ee Steve McManaman, ma doonayo in Erling Haaland uu waqtigan ku biiro Los Blancos, waxaanu ku dooday in xilli hore oo xirfaddiisa ah ay tahay oo uu u baahan yahay inuu kusii sugnaado Borussia Dortmund illaa inta uu khibrad fiican helayo.
“Marka aad eegto Erling Haaland ka Borussia Dortmund, xaqiiqdii degdeg ayay ku noqonaysaa inuu tago, sababtoo ah wuxuu u muuqdaa inuu faraxsan yahay, waxaana muhiim badan ah, in uu si joogto ah u ciyaarayo oo uu goolal dhalinayo.” Ayuu yidhi McManaman, waxaanu intaa ku daray: “Waxay tahay inuu tago marka uu khibrad helo ee uu ciyaaro 200 kulan, ama uu Dortmund u dheelo 20 illaa 30 ciyaarood oo Champions League, mana aha inuu markabka ka boodo isagoon qaan gaadhin oo uu si toos ah u tago Real Madrid.”
Halyeyga reer England waxa uu Haaland ugu soo tusaale qaatay dhibaatada haysata Luka Jovic oo xili ciyaareed uu 27 gool dhaliyey kaddib u dhaqaaqay Rela Madrid laakiin kursiga kaydka ku caajisay, waxaanu yidhi: “Waxaad arkaysaa waxa ku dhacay Luka Jovic xili ciyaareedka, waxa ku adkaatay inuu kubad ku laago Real Madrid kaddib xili ciyaareed sannadkii hore uu ku qaatay Germany.
“Haaland uma baahna culayskaas oo kale.
“Waxa intaas oo dhan ka horreysa, waxa aan maqlay in Real Madrid ay xiisaynayso Kylian Mbappe, labadoodubana uma b aahna inay halkaas isku waqti joogaan.”